I-Wesnoth umdlalo wendabuko we-GNU / Linux + Tricks | Kusuka kuLinux
xnmm | | Imidlalo
I-Wesnoth ngumdlalo omuhle kakhulu wecebo le-Linux nokuthi njengamanje izinhlobo zayo ezizinzile zingu-1.10, 1.11, 1.12 futhi ziyatholakala kunoma yiluphi uhlelo lwe-Linux, zisatshalaliswa ngaphansi kwe-GNU GPL v3.
I-Wesnoth egijima ku-ubuntu 14.04
Ukufaka i-wesnoth ku-Debian / Ubuntu nakwezinye izinto esizisebenzisayo
futhi lokhu kuzofaka inguqulo 1.10.7. Uma sekufakiwe siqala iWesnoth
isikrini sasekhaya sesnoth
1 Idlalwa kanjani i-WESNOTH
2 WESNOTH CHEATS
Idlalwa kanjani i-WESNOTH
I-Wesnoth ngumdlalo wamasu namaqhinga ngakho-ke kufanele ufunde ukuthi ungayidlala kanjani, ngakho-ke nansi inkomba elula. Lapho beqala ukudlala bazobona imenyu enezinketho ezahlukahlukene phakathi kwabo yilezi:
Isifundo: le modi yiyona engincoma ukuthi idlalwe kubaqalayo, ichaza yonke imithetho yomdlalo kanye namaqhinga namasu athile.
Umkhankaso: le yimodi ejwayelekile yomdlalo, umkhankaso iqoqo lezimo ngokulandelana ezinezinhloso zokuhlangabezana nazo.
Abadlali abaningi: kule modi ungadlala nabanye abadlali ukukhombisa amakhono akho.
Njengoba sifake iWesnoth, abaningi bangafuna "ukukopela" uhlelo lokuwina, ngakho-ke nanka amaqhinga alokho.
INDLELA YOKUGUQULA INANI LEGOLIDE EKUQALENI
Igolide liyinto ebalulekile ngakho-ke kuyadingeka ukuyinakekela kepha kwesinye isikhathi ayeneli ngakho-ke kudingeka okuningi.
Lokhu kukopela kusebenza kuphela ekuqaleni komdlalo.
Okokuqala siqala umdlalo omusha futhi ngemuva kokuthi esitshele izinhloso nezingxoxo ziphela, ithuba liyobe seliqalile ngaleso sikhathi.
eNautilus sicindezela ctrl + h
bese siya ku ~ / .local / share / wesnoth / 1.10 futhi kukhona ifolda kuyasindisa. Kokugcina kuzoba nefayela elinefomethi - -i-auto-igcinwe.gz. Lnoma vula (abayivuli iziphu) bese uvula ifayela lombhalo eliqukethe izwe.
Ngomhleli wabo wombhalo abawuthandayo babheka okufakiwe okubizwa igolide bese ushintsha inani kokunye okubonakala kubo, bese ucindezela umcibisholo waphansi bese usesha futhi igolide futhi bayiguqula ngenani langaphambilini nokunye kuze kube yilapho bengasatholi lutho.
Qaphela: hlola ukuthi ngabe iseduze kwayo isho okuthile okufana nalokhu isilawuli = noma igama = ngoba uma ingasho ukuthi bayayandisa negolide lesitha
Ngemuva kwalokho babheka ithikithi qala_igolide babeka inani abalibeke kukho konke okunye. Lapho lokhu sekwenziwe, bayaligcina ifayela bese belivala ngale ndlela elandelayo:
Chofoza ukuvuselela bese uvala kumphathi wokugcina umlando
futhi lokho kwanele.
SHINTSHA IGOLIDE KUWO WONKE UMDLALO
Kulokhu kuyinqubo efanayo nomehluko wokuthi i-start_gold ayiseshwanga.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Imidlalo » I-Wesnoth umdlalo womdabu wamathiphu we-GNU / Linux +
Ngicabanga ukuthi le yindatshana yokuqala ye-FromdeOSX?
cha akukhona nje ukuthi ngithanda ukuvela kwe-mac os x futhi ngikubeka kubuntu bami 🙂
Angicabangi ukuthi i-OS X inayo ibha ephuma kwesobunxele .. 😉
Nalu uzungu olunemiyalezo engaphansi yabantu yokushintshela ku-Mac. XD
Nkulunkulu wami !!! Kuzofanele ngiye kudokotela wamehlo ngemuva kokubona imidwebo yalowo mdlalo. Ahhh. XD
ube lapho kuneLoL ye-linux hahaha
Ukuze uyikhohlise, kufanele uqale ngemodi yokulungisa iphutha ungeza kusiqalisi »- - ukulungisa iphutha», imibhalo ndawonye, ​​futhi isivele ikuvumela ukuthi ufake imiyalo efana negolide $$$, unit hitpoinsts = xxx, njll, ngiyacela bona imibhalo. Yize uma ufuna ukukhipha lonke ijusi kulo mdlalo futhi uthanda izinselelo, kungcono ungalikhohlisi.
Ngendlela, ihluzo lingabukeka njenge-retro, kepha ngaphandle kwemininingwane umdlalo we-10/10. Omunye wemidlalo engiyithandayo.
Ngiyazi ngayo kumodi yokulungisa iphutha kepha okwenzekayo ukuthi uma uhlela ifayili ngqo ungalibumba kakhulu
UJoel Lino kusho
Izithonjana ezingama-59 phakathi kwesiqalisi ne-Dock, ingabe uzidinga eziningi kangaka?
Phendula uJoel Lino
Angazi kepha ngiyayithanda like
Lona ngumdlalo othathe amahora amaningi kimi eLinux nakude kakhulu. Umkhawulo owodwa engiwubonayo ukuthi awukwazi ukukhulisa usayizi wamafonti, izindaba kwezinye zezindlela zeNdaba zithuthukiswe kahle. Ukuzama ukunqoba yonke imikhankaso kumodi yeChampion kuyinjabulo yangempela futhi kuyinselelo, by the way uma ushaya ama-cheats ungasebenzisa imodi yokulungisa iphutha kusuka kumdlalo uqobo ukuze wandise iGolide lakho, bukhoma futhi ngaphandle kokuhlela amafayela:
Kulabo abafuna inselelo yesitebhisi yomdlalo we-inthanethi, nginawo.
Umdlalo omuhle kakhulu! yize ngangingeke ngikwazi ukushaya iNdlalifa emkhankasweni weSihlalo Sobukhosi.
Enye indlela yokukhohlisa ngokuhlela lawa mafayela ukuguqula ulwazi nokushaya amaphuzu ezitha, kepha umdlalo ulahlekelwa umusa wawo.
Uma benza imephu ye-DoTA, lokho kungaba okungcono kakhulu.
UCarlos Montealegre kusho
Ingabe umdlalo omuhle. Kungintshontshele amahora ambalwa ku-pc. Siyabonga ngokwabelana.
Phendula uCarlos Montealegre